एमालेको पर्यटन विभाग सचिवमा रिजाल « Pahilo News
एमालेको पर्यटन विभाग सचिवमा रिजाल
प्रकाशित मिति : 13 July, 2016 9:53 pm
२९ असार । नेकपा (एमाले) को पर्यटन प्रबद्र्धन विभागको सचिवमा चन्द्रप्रसाद रिजाल चयन भएका छन् । बुधबार एमाले मुख्यालय धुम्बराहीमा विभागका प्रमुख सूर्य थापाको अध्यक्षतामा बसेको पहिलो बैठकले पर्यटन व्यवसायी समेत रहेका उनलाई सर्वसम्मत सचिवमा चयन गरेको हो ।
अनेरास्ववियुबाट राजनीति थालेका धादिङका रिजाल अहिले एमाले निकट नेपाल राष्ट्रिय पर्यटन व्यवसायी संगठनका अध्यक्षका साथै सबै पर्यटन व्यवसायीहरुको साझा संस्था ट्रेकिङ एजेन्सिज एसोसिएशन अफ नेपाल (टान) का पनि अध्यक्ष छन् ।
बैठकलाई एमाले महासचिव ईश्वर पोखरेलले सम्बोधन गरेका थिए । उनले अविश्वास प्रस्तावको परीक्षण संसद्बाटै गर्ने बताए ।
यसअघि एमालेका १९ विभागले सचिव चयन गरिसकेका छन् । चयन भएका सचिवहरुमध्ये संगठनमा ज्ञानबहादुर भुजेल, पार्टी स्कुलमा ईश्वरी रिजाल, बैदेशिक मामिलामा यादव शर्मा, प्रचारमा विष्णु रिजाल, संसदीयमा अनन्द पौडेल, राजकीय मामिलामा केदार सञ्जेल, उद्योग व्यवसायमा श्रीचन्द्र शर्मा, श्रम तथा रोजगारमा निरज आचार्य, कृषि तथा भूमिसुधारमा लक्ष्मण लम्साल, युवा तथा खेलकुदमा दामोदर अर्याल, निर्वाचनमा बाबुराम दाहाल, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमा मोहन गौतम, सहकारीमा केबी उप्रेती, अर्थ तथा योजनामा डा. गोविन्दबहादुर थापा, सामान्य प्रशासनमा धनकुमारी सुनार, विज्ञान तथा प्रविधिमा रोमाकान्त पाण्डे, राष्टिय हित सुरक्षा प्रबद्र्धनमा सोभियत ढकाल, संघीय मामिलामा शिव गुरुंग, संस्कृतिमा प्रा. केशव सुवेदी चयन भइसकेका छन् । एमालेका ११ विभागले अझै सचिव छान्न बाँकी छ ।
यसैबीच सम्पर्क समन्वय कमिटीको सचिवमा नरेन्द्र श्रेष्ठ चयन भएका छन् ।